Toeran'i Mourinho any United pantheon? Ampahany tsotra amin'ny fifandimbiasana botched | 1xbet
ara-diplaomatika dia nisafidy ny hamadika ilay fanontaniana izy, milaza fa ho voatazona manokana amin’ireo mpanohana an’i Chelsea izy ho an’ny lohateny ligin-daza, Didier Drogba, John Terry ary ireo fahafinaretana rehetra nananany tamin’ny voalohany fotoana tao amin’ny Stamford Bridge, saingy mety ho elaela vao mamokatra vokatra mitovy amin’izany any United, izay nahalala mpitantana nahomby talohan’izay ary nanome ny tompon’andraikitra farany betsaka hiainana. Barney Ronay Vakio bebe kokoa irery ny firenena, na dia tsy tokony hohadinoina aza fa ny resy dia nanjary zava-dehibe tamin’ny Mourinho manokana.
Lehilahy toa an’i Sir Alex Ferguson – mpitantana manova endrika izay tsy vitan’ny hoe nitondra fahombiazana mbola tsy nisy teo aloha fa nanova ny hetsika filalaovana baolina kitra tamin’ny endriny manokana.
amin’ny klioba manana an’i Sir Alex Ferguson manokana, tsy lazaina intsony Sir Matt Busby.Farany, mahatsapa ny iray fa ho raisina ho toy ny ampahany amin’ny fifandimbiasan-toerana matetika izy. Mety ho za-draharaha kokoa noho ny David Moyes izy ary manana toetra mampihetsi-po kokoa noho i Louis van Gaal, saingy ny tsy fahombiazan’ny Manchester United rehetra dia toa tsy fahombiazana mitovy. ary ny ligin’i Europa tamin’ny vanim-potoana voalohany nisy azy, toa an’i Van Gaal nahavita naka ny sariny niaraka tamin’i Ferguson teo am-pandraisana ny amboaran’ny FA, ​​na dia mazava aza fa ny làlan’ny klioba amin’ny zavatra mety hoheverina ho dimy taona misimisy efa ambany.Na ny vola be lany amin’ny anaran’ny marquee toa an’i Paul Pogba, Alexis Sánchez ary Ángel Di María dia tsy nahavita nanafina ny zava-misy fa mitolona i United, mikely aina hahazo aingam-panahy, ary mety ho elaela.
> Angamba i Ferguson amin’ny fireharehany dia ho sarotra taminy ny niatrika ny vola ary nirehareha ny mpitantana City amin’izao fotoana izao, na dia marina aza fa i Liverpool sy Tottenham dia toa matanjaka kokoa noho ny amin’ny fotoana rehetra amin’ny vanim-potoana Premier League. Ka angamba tsy nanam-bintana fotsiny i Mourinho, mba hisambotra United flabby teny am-pidina.Mety marina ny nataony fa nanao ny sahirana tamin’ny nahavitana ny fizaran-taona faharoa izy, satria ny porofo misy dia manondro fa mety ho elaela alohan’ny ahatongavan’ny United ambony toy izany indray.
noho i Wilf McGuinness na i Frank O’Farrell, ireo mpitantana mazava tsy lavitra ny lalina izay nibolisatra tao aorian’ny Busby, kanefa ireo taona vitsivitsy lasa izay dia tsy hotsaroana miaraka amin’ny karazana tsiky miaraka amin’ny fahatsiarovana an’i Tommy Docherty na Ron Atkinson , lehilahy izay farafaharatsiny nahalala hoe aiza no tokony kendren’ny klioba. Mpankafy an’i Manchester United ao amin’ny Mourinho: ilay ‘mpandresy serial’ izay tsy maintsy nandeha Vakio bebe kokoa
United. Nisy marikivy tany Manchester izay tsy nety tamin’ny Theatre of Dreams.Na dia vitsy aza no himenomenona raha toa ka tokony haato amin’ny fotoana fialan-tsasatra ho an’ny Krismasy io epithet hackney io dia anisan’ireo andrasana hilalao miaraka amin’ny hafetsena ihany koa ireo mpitantana Manchester United. Tamin’ny farany, ity iray ity dia nahavita nanao asa nofinofy ho toy ny fijanonana tsy ilaina any amin’ny toby fiasana an-terivozona.Fiverina: misorata anarana ary mahazoa mailaka fandefasana baolina kitra isan’andro